शारदा नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब वडाबाटै दिने- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १२, २०७९ विप्लव महर्जन
सल्यान — अशक्त , जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई मध्यनजर गर्दै शारदा नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाटै वितरण गर्ने भएको छ । बैंकमा आउजाउ गर्दा अशक्त, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई सास्ती भएपछि नगरपालिकाले वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भएको हो ।
नगरका विभिन्न वडाबाट सदरमुकाम तथा श्रीनगर बजारमा रहेका बैंकमा आउनु पर्दा विभिन्न किसिमका कष्ट उठाउने मात्रै नभइ लामो समय हिँडनु पर्दा सास्ती भएको गुनासो आएपछि वडाबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको शारदा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए । उनले निर्वाचनका बेला जनाएको प्रतिबद्धत्ता समेत पूरा गरेको जानकारी गराए ।
‘विगतमा तत्कालीन गाविसले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरुपयोग भयो भनेर सरकारले बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सरकारले भत्ता दुरुपयोग हुनबाट बचाउन र सम्बन्धित व्यक्तिले नै भत्ता रकम पाओस् भनेर बैंकमा खाता खोल्ने काम राम्रो गर्‍यो तर बैंकमा खाता खोल्दा अशक्त, जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गले सास्ती भोग्नु परेको थियो । वडावडामा बैंक नहुँदा जेष्ठ नागरिक, अशक्त,अपाङ्ग, एकल महिला दुई/अढाई घन्टा लगाएर आउनु पर्ने त्यसमा पनि भीडभाडका कारण लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यताले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु परेको थियो । आउदा दिनमा अशक्त,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गले समस्या भोग्नु पर्ने छैन,’ उनले भने ।
नगरप्रमुख भण्डारीले सदरमुकाम तथा श्रीनगर बजारमा रहेका विभिन्न बैंकका म्यानेजरलाई बोलाएर छलफल गरेको र बैंकका कर्मचारी, वडा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमै वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने जानकारी गराए । उनका अनुसार पछि गएर घरघरमा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । त्यत्ति मात्र नभइ जेष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गलाई मध्यनजर गरेर वडामै उनीहरुको कागजपत्र प्रत्येक वर्ष रिनु गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने छ । शारदा नगरपालिकाभित्र अशक्त, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल गरी ६ हजार १ सय ३० जना ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले वडामै भत्ता वितरण गर्ने भएपछि अहिले अशक्त, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला खुसि भएका छन् । उनीहरुले भत्ताको लागि आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन र कागजात रिनु गराउनका लागि सम्बन्धितलाई अनिवार्य उपस्थित नगराइ आफन्तबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १२:५२
ओलीको व्यंग्य- 'भोट खसालेको भोलिपल्ट जनतालाई मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने ?'
काठमाडौँ — मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा विधिअनुसार चुनावका कारण मूल्य समायोजन नगरी चुनाव सकिएपछि हप्तामै दुई पटक मूल्यवृद्धि गरिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै ओलीले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । 'मूल्य समायोजनको नीतिको सट्टा यसै महिनाको पहिलो हप्ता दुईपल्ट १०-१० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिन्छ । एक हप्तामा दुई पटक, १ गते र ९ गते । एक हप्ताभित्र २ पल्ट मूल्यवृद्धि गरिन्छ,' उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा सोधे, '१५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति कहाँ गयो ? यो त जनतालाई धोका दिएको भयो । ३० गते भोट खसालुन्जेलसम्म चुप्प लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने जनतालाई ? त्यो पनि फेरि एक हप्ता नपुग्दै अर्को डण्डाले हान्दिने ?'
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले भने, 'प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा हप्तामा २० रुपैयाँले वद्धि भएपछि ढुवानीलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा असर पर्ने भयो । हरेक वस्तुको मूल्य तद्अनुसार नै हुने भयो ।'
मूल्यवृद्धमा वर्तमान सरकारले नकरात्मक कीर्तिमान कायम गरेको ओलीको भनाइ थियो । 'मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति अभूतपूर्व रहेको छ । यसको पछाडि कीर्तिमान कायम गरेको छ, नकरात्मक रुपले,' उनले भने ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १२:३०